Juventus Oo Wali Dooneysa Inay Lasoo Saxiixato Paul Pogba Xagaagan.
HomeHoryaalka IngiriiskaJuventus oo wali dooneysa inay lasoo saxiixato Paul Pogba xagaagan.
March 13, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Juventus ayaa lagu soo waramayaa inay wali ku rajo weyn tahay inay heshiis la saxiixato ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
27 jirkaan ayaa haatan ku maqan dhaawac muruqa ah lakiin waxa uu qaab ciyaareed fiican ku soo qaatay Red Devils xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay afar gool, seddexna caawiye ka ahaa 28 kulan oo uu saftay.
Qandaraaska Pogba ee Old Trafford ayaa dhacaya xagaaga soo aadan, waxaana weli lala xiriirinayaa inuu ka tagayo kooxda 20ka jeer hanatay horyaalka Ingariiska.
Sida laga soo xigtay Calciomercato , Juve ayaa weli dooneysa inay dib ula soo saxiixato xiddiga reer France suuqa soo socda, waxaana ay ku rajo weyn yihiin inay heshiis la gaaraan kooxda Ole Gunnar Solskjaer .
Pogba ayaa markii hore ka tagay Man United kuna biiray Juve 2012, isagoo afar xilli ciyaareed la qaatay kooxda reer Talyaani, halkaasoo uu kula guuleystay afar horyaal oo Serie A ah iyo labo koob oo Coppa Italia ah.
Ku guuleystaha Koobka Adduunka ayaa inta badan ku dhibtoonayay joogitaan tan iyo markii uu ku soo laabtay Manchester, in kasta oo wakiilkiisa Mino Raiola uu dhowr jeer sheegay in macmiilkiisu uu doonayo inuu u dhaqaaqo.